स्वास्थ्य मन्त्रालयको आलटालले सशुल्क कोरोना... :: विवेक राई :: Setopati
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आलटालले सशुल्क कोरोना परीक्षण गर्नेलाई १५ सय भार
विवेक राई काठमाडौं, साउन १८
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे आलटालका कारण सशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यक्तिले १५ सय रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपरेको छ।
मन्त्रालयले अनुमति पाएका सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरुले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर कोरोना परीक्षण गराउन सक्ने भनेको छ। तर पछिल्लो समय 'विध म्यानेजमेन्ट' ले सञ्चालन गरेको निजी प्रयोगशालाले ४ हजार रुपैयाँमै परीक्षण गर्दै आएको छ।
उक्त प्रयोगशालाले ४ हजारमै परीक्षण गरेपछि मन्त्रालयलाई समेत परीक्षण शुल्क घटाउन दबाब परेको छ। तर मन्त्रालय अहिले शुल्क घटाउने मनस्थितिमा छैन।
'शुल्क घटाउने कुराको निर्णय हुन बाँकी छ, निर्णय भएपछि भनौंला, थप कुरा पछि गरौंला' भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा‍. जागेश्वर गौतम यस विषयकाे कुराकानीबाट पन्छिए।
यसअघि कुरा गर्दा भने उनले आवश्यक हेरेर शुल्क घटाउन सकिने बताएका थिए। मन्त्रालयले सुरुमा उपत्यकाका तीन वटा सरकारी अस्पतालहरूलाई सशुल्क परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो। जसमा पाटन, वीर र टिचिङ अस्पताल छन्।
पछि मन्त्रालयले काठमाडौं मेडिकल कलेज र सानेपास्थित स्वार अस्पताललाई पनि सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने ढोका खोलिदियो। स्टार अस्पतालले आइतबार अपरान्हसम्म २ हजार ७ सय ९२ जनाको शुल्क लिएर परीक्षण गरेको छ।
मन्त्रालयले तोकिएका अस्पताल वा प्रयोगशालाहरूलाई ५ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भनेको छ। तर पछिल्लो पटक अनुमति पाएको विधले भने सुरुमै ४ हजार ५ सय अर्थात सरकारले तोकेको भन्दा एक हजार कममा परीक्षण गर्ने जनायो।
त्यसपछि सुरु गरेको पहिलो दिनपछि नै थप ५ सय रुपैयाँ कम गर्दै अहिले ४ हजारमै परीक्षण गर्दै आएको छ।
'अहिलेसम्म ४ सय ५० जनाको परीक्षण गरिसकेका छौं, सुरुमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा गर्ने भने पनि पछि फेरि ५ सय सस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने भएर शुल्क कम गर्यौं,' विध ल्याबका अध्यक्ष बिके भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने।
उनले पहिलो दिन ६० जनाको ४५ सय रुपैयाँ लिएर परीक्षण गरेको र दोस्रो दिनयता भने ४ हजारमै परीक्षण गर्दै आएको बताए। एक निजी प्रयोगशालाका जानकारले भने परीक्षण शुल्कलाई अझ घटाउन सकिने बताए।
उनले सरकारले परीक्षणको नाममा चर्को शुल्क असुलेर जनताको ढाड सेकेको जनाए। 'पहिले पिसिआर किट अलिक महँगो थियो तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै किट २ सय रुपैयाँले घटेको छ। न्यूनतम गर्दा पनि परीक्षण शुल्क ३ हजारमा गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
यसरी निजी प्रयोगशालाले कम शुल्कमा परीक्षण गर्ने तर सरकारले शुल्क घटाउने कुनै छाँटकाट नगर्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै आएका छन्।
अहिले परीक्षण मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले विदेश जाने व्यक्ति, निरोगिताको प्रमाण पत्र चाहिने, कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्ता वा स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहनेलाई सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने भनेको छ।
मापदण्ड अनुसार लक्षण देखिएका, संक्रमित ठाउँबाट आएका, विदेशबाट आएका वा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको मात्र निशुल्क परीक्षण हुने भनिएको छ। पछिल्लो पटक मात्र मन्त्रालयले मापदण्ड परिमार्जन गर्दै झाडापखाला लागेका व्यक्तिको पनि परीक्षण गर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन १८, २०७७, १९:४५:००
लामो दूरीका ड्राइभर: बाहिरबाट आउँदा केटाकेटी आशले हातमा हेर्छन्, के दिनु!
गोंगबु घटना: दहीमा स्लिपिङ ट्याबलेट हालेर बेहोश बनाइयो, त्यसपछि हत्या
१२८ वर्ष पुरानो अंग्रेजी कविता, जसमा छ काठमाडौंको चर्चा
मृतकका आफन्त भन्छन्- उनको पछिल्लो गतिविधिबारे हामी बेखबर थियौं
नेविसंघले तोडफोड गर्‍यो त्रिवि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यालय
त्रिवि विसंगतिपूर्ण द्वन्द्वको खेल मैदान बन्यो: कांग्रेस
ट्रम्पको ब्रिफिङ चलिरहँदा ह्वाइट हाउसबाहिर गोली चलेपछि…
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो- जसपाको टिप्पणी निन्दनीय छ
चीनद्वारा अमेरिकी सिनेटरहरूसहित ११ अमेरिकीमाथि प्रतिबन्ध
के सधैँ पुरानो सम्बन्धमै तड्पिने? पवित्रा घिमिरे
फुल्कीको जिन्स बसन्त गिरी
मेरो छोरा, तिमी त भाग्यमानी धनबहादुर बोहरा